နနွင်း - Dr.PhyoMaungMaung
ဂျင်းမျိုးနွယ်စုဝင် နနွင်းကို အရှေ့အိန္ဒိယ နဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာ သုံးလာတာကြာပါပြီ။ ရှေးခေတ်က နနွင်းကို အရောင်ကျစေတဲ့ ဆေးအနေနဲ့ အသည်းရောင်အသားဝါ၊ရာသီမမှန်ခြင်း၊ဆီးထဲသွေးပါခြင်း၊သွားကိုက်ခြင်း၊ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ဗိုက်အောင့်ခြင်းတွေမှာ သုံးခဲ့ပါတယ်။နနွင်းကို “turmeric” လို့ခေါ်ပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ တရုတ်၊ ထိုင်ဝမ်၊ ဂျမေကာ နဲ့ ဟေတီ တို့မှာ ဟင်းချက်စရာအနေနဲ့သုံးပါတယ်။
နနွင်းကို ဆေးအဖြစ်သုံးနိုင်တာအများအပြားရှိပေမည့် လူသုံးများတဲ့ အချို့ကိုရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။1980 မှာ လုပ်တဲ့ သုသေတနတစ်ခုမှာ နနွင်းက သွေးခဲခြင်း(vascular thrombosis)ကို သက်သာစေတယ်ဆိုပါတယ်။
၂။Phytotherapy Research ဂျာနယ်တစ်ခုမှာ ဖော်ပြခဲ့တာက နနွင်းကို မပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ကျရောဂါ (mild depression) ကုသမှုမှာ အန္တရာယ်မရှိပဲ အကျိုးရှိရှိသုံးနိုင်ပါတယ်တဲ့။
၃။နနွင်းမှာ အရောင်ကျစေတဲ့ အစွမ်းရှိပါတယ်။Oncogene ဂျာနယ်ရေးတာက နနွင်းဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံးရောင်ရမ်းခြင်းကို ကုတဲ့အစားအစာပါ။ကင်ဆာ၊ပြည်တည်အူရောင်ရောဂါ၊အဆစ်ရောင်ခြင်း၊ကိုလက်စတောမြင့်တက်ခြင်းတွေမှာ အသုံးဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
၄။နနွင်းရဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင် အစွမ်း နှင့် အရောင်ကျစေတဲ့အစွမ်းက အရေပြားအတွက်အကောင်းပါတယ်။အနာကျက်စေတယ်၊ဝက်ခြံအတွက်သာမက ဝက်ခြံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အနာရွတ်အတွက်ပါကောင်းပါတယ်။နနွင်းနဲ့ တစ်ချို့လူတွေရဲ့ အရေပြားက မတည့်တတ်ပါ။ဒါကြောင့် မျက်နှာ မလိမ်းခင် လက်မောင်းကို အရင်လိမ်းသင့်ပါတယ်။တစ်ရက်လောက် တည့်မတည့်ကြည့်ပြီးမှ မျက်နှာအတွက်သုံးပါ။
၅။နနွင်းက ကင်ဆာဆဲလ်ကို သတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်က
Cancer Research UK (အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ကင်ဆာသုသေတန) အတွင်းမှာတောင် အတော်လူပြောများနေပါပြီ။ရင်သားကင်ဆာ၊အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းကင်ဆာ နှင့် အရေပြားကင်ဆာတွေ အတွက်ကောင်းပါတယ်။Baylor Scott & White Research Institute က 2017 ဇူလိုင်လမှာ သုသေတနတစ်ခု လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသုသေတနမှာ တွေ့ရှိတာက နနွင်းကို ကင်ဆာဆေးသွင်းကုသလို့ မအောင်မြင်တဲ့ ပန်းကရိယတ် (pancreas) ကင်ဆာတွေကို ကုနိုင်တယ်ပြောပါတယ်။
၆။နနွင်းက အင်ဆူလင်ကို ဆဲလ်တွေပိုကြိုက်အောင်လုပ်ပေးပါတယ်။ဒါကြောင့် ဆီးချိုသမားတွေအတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်။ဆီးချိုကြောင့် ဖြစ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်။
၇။Biofactors ဂျာနယ်ကရေးတာ နနွင်းက ဝိတ်ကျစေပါတယ်တဲ့။
၈။နနွင်းမှာပါတဲ့ curcumin က အူလမ်းကြောင်းအနာကိုကျက်စေတယ်။အကျိုးပြု probioticsကိုရှင်သန်ကြီးထွားစေတယ်။ဒါကြောင့် အူလမ်းကြောင်းရောဂါကုတဲ့နေရာမှာသုံးတယ်။
၉။ ကိုလက်စတော ကျစေတယ်။
၁၀။U.S. Army Institute of Surgical Research က မီးလောင်အနာတွေကို နနွင်းထည့်ပေးလို့ ရတယ်လို့ရေးပါတယ်။
နနွင်းကောင်းကျိုးအများစုက နနွင်းကို အစာအနေနဲ့စားရင်းတွေ့ခဲ့တာပါ။ဒါဟာ ဘီစီ လေးရာစုလောက်က ဆေးပညာရဲ့ ဖခင်ကြီး ဟစ်ပိုကရေးတီး ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ စားတတ်လျှင် အစာတိုင်းက ဆေးဖြစ်ပေမယ့် မစားတတ်လျှင် သေစေလောက်သော ရောဂါရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် စာဖတ်ပါ။လေ့လာပါ။အစာကို ဆေးအနေနဲ့သုံးပြီး ကျန်းမာအောင်နေကြပါ။
ဂငျြးမြိုးနှယျစုဝငျ နနှငျးကို အရှအေိ့န်ဒိယ နဲ့ အရှအေ့လယျပိုငျးဒသေတှမှော သုံးလာတာကွာပါပွီ။ရှေးခတျေက နနှငျးကို အရောငျကစြတေဲ့ ဆေးအနနေဲ့ အသညျးရောငျအသားဝါ၊ရာသီမမှနျခွငျး၊ဆီးထဲသှေးပါခွငျး၊သှားကိုကျခွငျး၊ရငျဘတျအောငျ့ခွငျး၊ဗိုကျအောငျ့ခွငျးတှမှော သုံးခဲ့ပါတယျ။နနှငျးကို “turmeric” လို့ချေါပါတယျ။ အငျဒိုနီးရှား၊ ဖိလဈပိုငျ၊ တရုတျ၊ ထိုငျဝမျ၊ ဂမြကော နဲ့ ဟတေီ တို့မှာ ဟငျးခကျြစရာအနနေဲ့သုံးပါတယျ။
နနှငျးကို ဆေးအဖွဈသုံးနိုငျတာအမြားအပွားရှိပမေညျ့ လူသုံးမြားတဲ့ အခြို့ကိုရေးပေးလိုကျပါတယျ။
၁။1980 မှာ လုပျတဲ့ သုသတေနတဈခုမှာ နနှငျးက သှေးခဲခွငျး(vascular thrombosis)ကို သကျသာစတေယျဆိုပါတယျ။
၂။Phytotherapy Research ဂြာနယျတဈခုမှာ ဖျောပွခဲ့တာက နနှငျးကို မပွငျးထနျတဲ့ စိတျကရြောဂါ (mild depression) ကုသမှုမှာ အန်တရာယျမရှိပဲ အကြိုးရှိရှိသုံးနိုငျပါတယျတဲ့။
၃။နနှငျးမှာ အရောငျကစြတေဲ့ အစှမျးရှိပါတယျ။Oncogene ဂြာနယျရေးတာက နနှငျးဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာ အကောငျးဆုံးရောငျရမျးခွငျးကို ကုတဲ့အစားအစာပါ။ကငျဆာ၊ပွညျတညျအူရောငျရောဂါ၊အဆဈရောငျခွငျး၊ကိုလကျစတောမွငျ့တကျခွငျးတှမှော အသုံးဝငျတယျလို့ဆိုပါတယျ။
၄။နနှငျးရဲ့ ဓာတျတိုးဆနျ့ကငျြ အစှမျး နှငျ့ အရောငျကစြတေဲ့အစှမျးက အရပွေားအတှကျအကောငျးပါတယျ။အနာကကျြစတေယျ၊ဝကျခွံအတှကျသာမက ဝကျခွံကွောငျ့ဖွဈတဲ့ အနာရှတျအတှကျပါကောငျးပါတယျ။နနှငျးနဲ့ တဈခြို့လူတှရေဲ့ အရပွေားက မတညျ့တတျပါ။ဒါကွောငျ့ မကျြနှာ မလိမျးခငျ လကျမောငျးကို အရငျလိမျးသငျ့ပါတယျ။တဈရကျလောကျ တညျ့မတညျ့ကွညျ့ပွီးမှ မကျြနှာအတှကျသုံးပါ။
၅။နနှငျးက ကငျဆာဆဲလျကို သတျနိုငျတယျဆိုတဲ့ ထငျမွငျယူဆခကျြက
Cancer Research UK (အင်ျဂလနျနိုငျငံ ကငျဆာသုသတေန) အတှငျးမှာတောငျ အတျောလူပွောမြားနပေါပွီ။ရငျသားကငျဆာ၊အစာအိမျအူလမျးကွောငျးကငျဆာ နှငျ့ အရပွေားကငျဆာတှေ အတှကျကောငျးပါတယျ။Baylor Scott & White Research Institute က 2017 ဇူလိုငျလမှာ သုသတေနတဈခု လုပျခဲ့ပါတယျ။ဒီသုသတေနမှာ တှရှေိ့တာက နနှငျးကို ကငျဆာဆေးသှငျးကုသလို့ မအောငျမွငျတဲ့ ပနျးကရိယတျ (pancreas) ကငျဆာတှကေို ကုနိုငျတယျပွောပါတယျ။
၆။နနှငျးက အငျဆူလငျကို ဆဲလျတှပေိုကွိုကျအောငျလုပျပေးပါတယျ။ဒါကွောငျ့ ဆီးခြိုသမားတှအေတှကျအသုံးဝငျပါတယျ။ဆီးခြိုကွောငျ့ ဖွဈတဲ့နောကျဆကျတှဲရောဂါတှကေိုလညျး သကျသာစပေါတယျ။
၇။Biofactors ဂြာနယျကရေးတာ နနှငျးက ဝိတျကစြပေါတယျတဲ့။
၈။နနှငျးမှာပါတဲ့ curcumin က အူလမျးကွောငျးအနာကိုကကျြစတေယျ။အကြိုးပွု probioticsကိုရှငျသနျကွီးထှားစတေယျ။ဒါကွောငျ့ အူလမျးကွောငျးရောဂါကုတဲ့နရောမှာသုံးတယျ။
၉။ ကိုလကျစတော ကစြတေယျ။
၁၀။U.S. Army Institute of Surgical Research က မီးလောငျအနာတှကေို နနှငျးထညျ့ပေးလို့ ရတယျလို့ရေးပါတယျ။
နနှငျးကောငျးကြိုးအမြားစုက နနှငျးကို အစာအနနေဲ့စားရငျးတှခေဲ့တာပါ။ဒါဟာ ဘီစီ လေးရာစုလောကျက ဆေးပညာရဲ့ ဖခငျကွီး ဟဈပိုကရေးတီး ပွောခဲ့တဲ့အတိုငျးပါပဲ။ကြှနျတျောအမွငျကတော့ စားတတျလြှငျ အစာတိုငျးက ဆေးဖွဈပမေယျ့ မစားတတျလြှငျ သစေလေောကျသော ရောဂါရနိုငျပါတယျ။ဒါကွောငျ့ စာဖတျပါ။လလေ့ာပါ။အစာကို ဆေးအနနေဲ့သုံးပွီး ကနျြးမာအောငျနကွေပါ။